Xidho siddooyinkaga, Apple waxay rabtaa inaan helno nolosha ugu caafimaad qab badan | Wararka IPhone
Xidho siddooyinkaga, Apple waxay rabtaa inaan helno nolosha ugu caafimaad badan ee suurtogalka ah
Apple ayaa calaamadeeyay Apple Watch siyaabo kala duwan tan iyo markii la bilaabay, ka dambeeya moodeelkaas dahabka ah ayaa laga tagay oo qiimihiisu ka badan yahay kun euro oo lagu iibiyey dukaamo qaas ah oo qaali ah. Maya, Apple, taasi ma shaqeyn ... tartiib tartiib ayay u garteen taas qaabka ugu jaban wuxuu ahaa iibiyaha ugu fiican iyo istiraatiijiyadda iibka ayaa la beddelay iyadoo la joojinayo moodooyinka ugu gaarka ah ee diiradda la saarayo Apple Watch oo diiradda saaraya qaab nololeedkeenna, iyo wax walba oo ka sarreeya oo leh hal ujeedo: in lagu hagaajiyo qaab nololeedkeenna si caafimaad leh.
Iyo sidee ku kasban kartaa nolol caafimaad leh? Apple ayaa tan ku fududeysay in yar giraan waxqabad, giraanno xidhan maalintii oo dhan iyadoo ku xidhan laxanka howlaha aan qabno, iyo maalin walba mid cusub si aan ugubilaabno bilow wanaagsan. Apple waxay rabtaa inaan barano muhiimada ay leedahay xirida siddooyinkan, tani waa wax aan ku aragno inta badan dhibcaha dhiirrigeliya Apple Watch, marka lagu daro, ragga ka socda Cupertino ayaa hada ku daray a qaybta websaydhkooda halkaas oo aan ku baran karno wax ku saabsan hawlgallada saddexda wareeg ee waxqabadka. Boodka ka dib waxaan ku siinaynaa dhammaan faahfaahinta qaybtan cusub.
El microsite gaar ah loogu tala galay siddooyinka Apple Watch, Ama Barnaamijka waxqabadka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood: Dhaq-dhaqaaqa (Giraan cas), Jimicsiga (giraan cagaaran), iyo Taagan (giraan buluug ah). Waa qeyb kasta oo aan ku baran karno tusaale ahaan aan ku qarash gareyn karno 170 kaloori oo ku socda eeygayagawaxa la sameeyo 30 daqiiqo waxqabad kasta fiisikiska ayaynu nahay yareynta halista dhibaatooyinka wadnaha, ama taas oo naga caawinaysa Apple Watch aniga ahaancagahaaga ku joog ugu yaraan 1 daqiiqo 12 saacadood gudahood kala duwan waxaan horeyba u yareynaynaa halista sonkorowga.
Hadda wax walba gacantaada ayey ku jiraan, ka faa'iideyso maalinta quruxda badan ee hadda bilaabatay oo kugu dhiirrigelisa sii xitaa hal jeedin, in yar oo aad sameyso waxaad arki kartaa sida siddooyinki saacada Apple Watch ay u xirmayaan Si tartiib tartiib ah, ii rumee in aysan daruuri aheyn in dadaal badan la sameeyo si loo ilaaliyo xawaaraha nolosha isla markaana loo sameeyo jimicsiga lagama maarmaanka u ah nolol maalmeedkeena. Marka si aad u dhaqaaqdo, oo aad u xirto siddooyinkiisa Apple Watch-kaaga. Midda ugu dambeysa, ku dar fargallada waxqabadka qaybta aad u isticmaaleyso Apple Watch, waxay kugu dhiirrigelin doontaa inaad xirto giraanyada ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Xidho siddooyinkaga, Apple waxay rabtaa inaan helno nolosha ugu caafimaad badan ee suurtogalka ah
Kaliya maahan HomePod, Sonos One ayaa sumad sameeya sidoo kale
Xiaomi Mi Mix 2s wuxuu nuqul ka sameeyaa isdhexgalka astaamaha iPhone X